Ukugcinwa kwelifu labucala-Amethystum Storage Technology Co., Ltd.
Inkcazo emfutshane yelifu labucala
Ilifu labucala sisixhobo sokugcina esinokugcina idatha ephakathi njengeefoto, iimuvi, umculo, kunye neefayile. Ubunini babucala ngengqiqo yokwenyani kufuneka buthethe ukuba akufuneki kubekho ungenelelo lomntu wesithathu, kungabikho kubekwa iliso kwedatha kunye nokulandelelwa kwayo yonke imisebenzi, kunye neenkcukacha zobuqu zomsebenzisi nazo kufuneka zilawulwe ngumsebenzisi ngokwakhe, ngaphandle kokuphazamiseka kwangaphandle.
Xa kuthelekiswa ne-NAS yendabuko (ukugcinwa okuqhotyoshelwe kwinethiwekhi), ukusebenza kwefu yangasese kulula kwaye iyasebenza kuluhlu olubanzi lwabathengi. Ilifu labucala lingasetyenziselwa ukusetyenziswa komntu, okanye indawo yokugcina ekwabelwana ngayo kunye nezalamane, abahlobo kunye noogxa. Ilifu labucala linokufumaneka ngekhompyuter okanye ngefowuni ephathwayo. Idatha iphantsi kolawulo lwakho, kwaye ungayisebenzisa nanini na naphi na. Yeyakho kuphela, kwaye nguwe kuphela onokungena kwisithuba. Xa kuthelekiswa neenkonzo zamafu oluntu, ilifu labucala libonelela ngeendlela ezahlukeneyo, ezifanelekileyo kunye nemisebenzi enomdla.
Khusela ubumfihlo kunye nokhuseleko
Idatha igcinwa ngqo ekhaya, kwaye zonke ezonxibelelwano zifihliweyo. Idatha ayilayishwanga kwilifu likawonke-wonke, elinokukhusela ubumfihlo kakhulu. Nokuba ilahlekile okanye ibiwe, idatha ikhuselekile kwaye ithembekile.
Ukugcinwa kwe-Hierarchical yedatha eshushu kunye nebandayo, i-Blu-ray yokugcina imidiya (i-Amethystum Professional Blu-ray Disc) yedatha yokugcina, enokwandiswa ngokungapheliyo. Xa sele itshisiwe, ayinakonakaliswa ukuqinisekisa ukhuseleko.
Idatha eshushu kunye nedatha ebandayo igcinwa ngokulandelelana, imidiya yokugcina i-Blu-ray (i-Amethystum professional Blu-ray disc) inokugcinwa kwedatha kunye nokwandiswa kwamandla okungenamkhawulo, xa itshisiwe, engenako ukuphazamisa ukuqinisekisa ukhuseleko.
Ukwabelana kosapho, ukucofa nje ukwabelana
Ngokhetho lwezicwangciso zeakhawunti yentsapho, ivumela ukwabelana nge-Photoegg yokugcina phakathi kwawo onke amalungu entsapho (max.10) ngokuthenga i-Photoegg enye kuphela. Iiakhawunti zosapho zizimeleyo omnye komnye ngokuhlukaniswa kwedatha, zivumela iifoto ukuba zijongwe ngabanini bazo kuphela, nto leyo ikhusela ngokupheleleyo ubumfihlo babo.
Ukufikelela kude, jonga idatha nangaliphi na ixesha.
Xa isixhobo sixhunyiwe kumandla kunye ne-Intanethi, unokujonga ngokufanelekileyo nangokufanelekileyo iifayile ezigcinwe nge-APP nangaliphi na ixesha.
Iseva ekrelekrele yoSapho lokuGcinwa kweLifu ifakwe kwi-algorithm yokufunda enzulu ye-AI, ehlela ngokuzenzekelayo iifayile kunye neefoto zolawulo olulula kunye nokukhangela. I-algorithm yokufunda enzulu ye-Intelligent Family Cloud Storage Server ikhutshelwa ngokuthe ngqo kwindawo yasekhaya, igqibezela icomputing yasekhaya ngaphandle koqhagamshelo lwamafu.
Unokukhetha imidiya ye-Blu-ray kwi-backup data, ukuvelisa umfanekiso wesibuko ngokucofa kanye, uyitshise kwidiski, kwaye uyigcine ixesha elide.
USB ephathekayo yokugcina backup
Umncedisi wogcino lweLifu loSapho olukrelekrele lunokufunda ngokuthe ngqo izixhobo zokugcina eziphathwayo ze-USB, ezifana neplagi kunye ne-U disk, i-hard disk ephathekayo, kunye nedatha inokukhutshelwa ngokuthe ngqo kwi-U disk okanye i-hard disk ephathekayo.
Ulwazi okanye iteknoloji enxulumene nokugcinwa kwelifu labucala
Umsebenzi wokufikelela kude
Ilifu labucala yindawo yokugcina inethiwekhi enokufikelela kuyo naphi na emhlabeni xa nje iqhagamshelwe kwinethiwekhi kwaye inikwe amandla. Umzekelo, unokumamela umculo ngaphandle kokuthatha indawo kwifowuni yakho, okanye unokufikelela kwiifayile kwilifu labucala elibeka ekhaya nangaliphi na ixesha naphi na xa uphumile.
Njengoko sonke sisazi, izixhobo ze-intranet azikwazi ukufikelela ngokuthe ngqo kwinethiwekhi yoluntu. Uzenza njani izixhobo ezibini ze-intranet kwiinethiwekhi ezahlukeneyo zinxibelelana, njengetheminali yekhompyuter yakho, ifowuni yakho ephathwayo kunye ne-Amethystum Family Cloud? Itekhnoloji yeP2P ( peer to peer ), ekwabizwa ngokuba yitekhnoloji yokunxibelelana koontanga, bubuchwephesha obutsha bothungelwano obunamandla okungena kwi-intranet, eyenza ukuba izixhobo ezibini ze-intranet zinxibelelane ngokuthe ngqo. Okubaluleke ngakumbi, iteknoloji ye-P2P ayixhomekeke kwikhono lomncedisi wokudlulisa, kwaye ayikhawuleli isantya sothumelo. Ukuhanjiswa kugqitywa kuphela ngokusebenza kwabathathi-nxaxheba kunye nesantya sothungelwano lwenethiwekhi phakathi kwezi zibini, ukuqinisekisa ukusebenza kokudluliselwa kwinqanaba elikhulu.
Kutheni idatha yeNAS inokufikelelwa ngezixhobo ezininzi? Oku kungenxa yokuba i-Amethystum NAS isekela iiprotokholi zonxibelelwano ezininzi, kuquka i-HTTPS, iWebDav kunye ne-HDMI (phantsi kophuhliso). "Iprotocol yonxibelelwano" ibhekisa kwimigaqo esetyenziswa ziikhompyuter ukuthumela nokufumana idatha. Ukuba iprotocol yonxibelelwano ekhankanyiweyo ayixhaswanga, idatha ayikwazi ukudluliselwa okanye ukwabelana.
I-MD5 yi-Message-Digest Algorithm 5 (umyalezo-digest algorithm 5), isetyenziselwa ukuqinisekisa ukuhanjiswa kolwazi olupheleleyo noluhambelanayo. I-algorithm ye-MD5 ineempawu zokuxinzelela, ukubala okulula, ukuchasana nokuguqulwa, ubuthathaka bokuchasana nokungqubana, ukuchasana okunamandla, kunye nokungaguquki. Isetyenziswa ngokubanzi kwiimeko ezifana nokuqinisekisa ukuhambelana kwedatha, ukuchasana nokuchithwa, utyikityo lwedijithali, kunye nokuthintela ukujongwa ngokuthe ngqo kokubhaliweyo.